Ny COVID-19 dia nampijanona ny fizahantany any Slovenia tamin'ny volana aprily
Home » Toerana fitsangatsanganana » Ny COVID-19 dia nampijanona ny fizahantany any Slovenia tamin'ny volana aprily
Noho ny hetsiky ny governemanta Sloveniana misoroka ny fiparitahan'ny Covid-19 aretina, tsy misy fahatongavan'ireo mpizahatany ary 11,000 eo ho eo monja ny fijanonana mandritra ny alina (99% latsaka noho ny tamin'ny volana aprily 2019) no voarakitra ao amin'ny toeram-ponenan'ny mpizahatany any Slovenia tamin'ny volana aprily 2020.
Amin'ny volana aprily 2020 ny ankamaroan'ny mpizahatany dia mijanona ao anaty programa fanabeazana
Ireo toeram-ponenan'ireo mpizahatany izay nandrakitra ny fijanonan'ny mpizahatany tamin'ny aprily 2020 izay nampiantrano vahiny matetika tao anatin'ny fifanakalozana mpianatra iraisampirenena, izay mijanona ao Slovenia mandritra ny fotoana lava kokoa.
Tamin'ny 16 martsa 2020 dia namoaka ny ôrdônansy momba ny fandrarana vonjimaika amin'ny fanomezana sy fivarotana entana ary serivisy ho an'ny mpanjifa ao amin'ny Repoblikan'i Slovenia ny governemanta. Ireo trano fivahinianan'ny mpizahatany dia tsy afaka nanoratra ny fahatongavan'ireo mpizahatany vaovao taorian'ity daty ity hatramin'ny 18 Mey, raha nanamaivana ny hetsika fisorohana ny fihanaky ny aretina coronavirus ihany koa ho an'ny hetsika fizahan-tany sasany.
Tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2020, 47% no vitsy ireo mpizahatany mijanona mandritra ny alina noho ny tamin'ny fe-potoana mitovy amin'ny 2019
Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny faran'ny volana aprily 2020 dia nahatratra 660,000 52 mahery ny mpizahatany (2019% latsaka noho ny vanim-potoana mitovy amin'ny 1.8) ary mihoatra ny 47 tapitrisa no mijanona mandritra ny alina (2019% vitsy noho ny vanim-potoana mitovy amin'ny XNUMX).
Ny mpizahatany ao an-toerana dia nahatratra efa ho 259,000 no tonga (44% latsaka noho ny tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taona 2019) ary 777,000 fijanonana amin'ny alina (39% vitsy). Mpizaha tany avy any ivelany no niteraka olona tonga efa ho 402,000 (56% vitsy noho ny tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taona 2019) ary efa ho 1.1 tapitrisa no mijanona mandritra ny alina (51% vitsy).
Ny mpiasa VIA Rail Canada Montréal dia manaporofo fa miabo amin'ny COVID-19
Karaiba no faritany mahazaka COVID be indrindra amin'ny Tontolo Andrefana